မျိုးပေါင်းစု - ဝီကီပီးဒီးယား
ဇီဝဗေဒ မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်းဆိုင်ရာအဆင့်များတွင် မျိုးပေါင်းစု (Phylum) သည် လောက (Kingdom) အဆင့်အောက်ဖြစ်ပြီး၊ မျိုးပေါင်း (Class) အဆင့်၏ အပေါ် တွင်ရှိသော အဆင့်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာအားဖြင့် ဖိုင်လဲမ် (အင်္ဂလိပ်: Phylum /ˈfaɪləm/; အများကိန်း၊ phyla)ဟု ခေါ်သည်။ အစဉ်အလာအရ ရုက္ခဗေဒဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်းတွင် ဒဗစ်ရှင်း သို့မဟုတ် မျိုးခွဲ (Division) ဟူသော ဝေါဟာရကို ဖိုင်လဲမ် (Phylum) အစားသုံးလေ့ရှိသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေညှိ၊ မှိုနှင့်အပင်များ အမည်ပေးခြင်း စည်းမျဉ်းတွင်မူ ၎င်းအသုံးအနှုန်းနှစ်ခုကို တူညီသည်ဟု လက်ခံထားသည်။
(ဇီဝမျိုးရိုးခွဲခြားမှုဆိုင်ရာ အဓိကအဆင့်ကြီး) (၈)ဆင့် ရှိသည်။ လောက (kingdom) တစ်ခု၏အောက်တွင် မျိုးပေါင်းစု (Phylum) တစ်ခုဖြစ်စေ၊ အများဖြစ်စေ ရှိသည်။ အခြား အဆင့်ခွဲငယ်များကို ဤနေရာတွင် မပြပါ။
ဇီဝမျိုးရိုးခွဲခြားခြင်း အဓိကအဆင့်များ - နယ်ပယ်(Domain)၊ လောက(kingdom)၊ မျိုးပေါင်းစု(phylum)၊ မျိုးပေါင်း(class)၊ မျိုးစဉ်(order)၊ မျိုးရင်း(family)၊ မျိုးစု(genus)၊ မျိုးစိတ်(species)။ ပုံတွင်နမူနာအနေဖြင့် မြေခွေးနီ၏ ဇီဝမျိုးရိုးခွဲပုံအဆင့်များကို ယှဉ်ကြည့်နိုင်ရန်ပြထားသည်။
↑ McNeill၊ J.; et al., eds. (2012)။ International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Melbourne Code), Adopted by the Eighteenth International Botanical Congress Melbourne, Australia, July 2011 (electronic ed.)။ International Association for Plant Taxonomy။ 2017-05-14 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Life sciences"။ The American Heritage New Dictionary of Cultural Literacy (third ed.)။ Houghton Mifflin Company။ 2005။ 2008-10-04 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Phyla in the plant kingdom are frequently called divisions.
↑ Berg၊ Linda R. (2 March 2007)။ Introductory Botany: Plants, People, and the Environment (2 ed.)။ Cengage Learning။ p. 15။ ISBN 9780534466695။ 2012-07-23 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မျိုးပေါင်းစု&oldid=714951" မှ ရယူရန်
၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၇:၀၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၇:၀၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။